Ungakuthhengisa kanjani okuqukethwe kwakho kwe-B2B ukukhiqiza ukuhola nge-NetLine Portal | Martech Zone
Ungakuthhengisa kanjani okuqukethwe kwakho kwe-B2B ukukhiqiza ukuhola ngeNetLine Portal
NgoMsombuluko, Agasti 21, 2017 NgoLwesibili, Agasti 22, 2017 Douglas Karr
I-NetLinePortal iyipulatifomu yokukhiqiza ehola phambili ye-B2B lapho ama-ejensi angakha khona umkhankaso wokuhlanganiswa kokuqukethwe ukushayela ukuqwashisa noma ukuthatha imikhondo.
Uhlelo luhlinzeka ngeminikelo emibili ehlukene:
Ukuhola ukukhiqiza ukuhola, ukuvumela ukuthi uhlanganise okuqukethwe kwakho, usebenzise izihlungi eziholayo nokushaya amagoli, sebenzisa ukumaketha okusekelwe ku-akhawunti, engeza imibuzo yangokwezifiso, setha isabelomali sakho nohlelo, finyelela imibiko yomkhankaso, futhi uthole ukuhola kwekhwalithi. Ukuhola kuqala ku- $ 9 ngokuhola ngakunye.
OkuqukethweFlow ukushayela ulwazi lomkhiqizo ngokuhlanganisa okuqukethwe kwakho nokufinyelela imibiko yomkhankaso. Lokhu kukhululekile kubo bonke abasebenzisi.
INetLine isebenza ngenethiwekhi yokuthengiswa kokuqukethwe ye-B2B enkulu kunazo zonke, UMfuResponse, ebenza bakwazi ukuxhuma okuqukethwe kwakho nezethameli ezifanele. Inethiwekhi ithwebula imininingwane yenkampani yokuqala ethunyelwe ngqo ngamalungu agcwalisa amafomu awo ukucela okuqukethwe kwakho.
Ozakwethu bokushicilela, njengathi, basebenza ngenkuthalo lapho bethola khona okuqukethwe okusha okuqondene nezintshisekelo zababukeli babo, ukuqapha ukusebenza, nokuhlaziya ukubukwa kwezithameli ngemibiko yabo ye-Audience Intelligence Reports (AIR). Futhi akuyona nje noma yiliphi isayithi abalamukelayo, iRevResponse inesilinganiso sokwenqaba esingu-99% sezicelo ezintsha zabashicileli zokujoyina.
Inqubo yokuvunywa ifaka phakathi ukuhlolwa ngokuphelele ukuqinisekisa ukuthi bonke abashicileli bahlangabezana nezinkombandlela zomphakathi eziqinile, okunikeza abakhangisi nge:
Okuqukethwe kwangempela - Okuqukethwe kwakho kunenkampani enhle — kushicilelwe kulabhulali yezinsizakusebenza ngobukhulu yokuqukethwe kuwebhu, iTradePub.com, ephethwe yiNetLine. Amalungu abo angacela okuqukethwe kwakho futhi akuthole nganoma yisiphi isikhathi kunoma iyiphi idivayisi esemtatsheni wabo wezincwadi.
Ukuxhumana kwangempela - Uma usebenzisa inethiwekhi enkulu kakhulu yokuthengiswa kokuqukethwe kwe-B2B futhi uthwebula amaphrofayli wangempela ngqo kochwepheshe, awudingi ukuya kwenye indawo - yonke imikhondo yenziwa yipulatifomu yabo, nabashicileli babo. Babuze ukuthi ukuholephi kwakho kuvela kuphi futhi bazokutshela - ikheli le-IP, isitembu sesikhathi, nokuningi - ukwenza izinto obala okungu-100%.
Ukuzibandakanya Kwangempela - Inethiwekhi yabo yokuhlanganiswa kokuqukethwe kwe-B2B kanye nokwesekwa kwelabhulali yezinsizakusebenza ukusebenzisana kwabasebenzisi bangempela lapho ochwepheshe abayizigidi eziyi-125 + bacwaninga futhi basebenzise okuqukethwe njalo ngenyanga - leyo yinhloso yangempela. Izenzo zingaphezu kwe-a ukubuka ikhasi, izenzo zabo zifaka izicelo zokuqukethwe, ukuqinisekiswa kwe-imeyili, nokulandwa kokuqukethwe ngokugcwaliseka kokuhola kwesikhathi sangempela. Okungu-80% wokuqukethwe okushicilelwe okuceliwe kulandwa ezinsukwini ezintathu.
Ikhwalithi yangempela - Inqubo yabo yokuhlanzwa kwedatha ibekwe yonkana emikhankasweni evikela ikhwalithi yemikhono efakiwe. Isixazululo esisuselwa ekusebenzeni nethimba labo lochwepheshe bezizukulwane eziholayo baqinisekisa ukuthi uzokhokhela kuphela imikhondo ehlangabezana nezinhloso zomkhankaso owabelwe - akukho okungaphansi kwalokho.
Abantu Bangempela - Ubulungu babo buqukethe izinkulungwane zochwepheshe abafake iphrofayili yobungcweti yamaphuzu ayi-15 + ukufinyelela kulabhulali yabo yezinsizakusebenza, ibafanele njengezethameli ezibandakanya kakhulu - Azikho izinhlu ezithengiwe noma eziqashiwe, isikhathi. Izingcezu zokuqukethwe eziyizigidi ezingama-40 + zidliwe ngamalungu azo ohambweni lwazo lokucwaninga ngobuchwepheshe neNetLine.
Ukuvikeleka Kwangempela - Inqubo yokuhola isizukulwane esivikelekile isiqedile ukuqeda ngokusebenzisa izindlela zokuphepha eziphelele ezibandakanya ukuskena okuqhubekayo kokulimazeka kweQualys nokubethela kwe-SSL.
Amanani wangempela - INetLine isebenza ngokulandela amanani ayisisekelo ayisihlanu: ukuqamba, ukusebenzisana, ubuqotho, ukwaneliseka kwamakhasimende, kanye nokuziphendulela. Ubuchwepheshe babo obuthuthukile nezinga labo elikhulu libekwe ngokukhethekile ukufeza imiphumela abathengisi abayifunayo - abayifaki engcupheni impumelelo yabo ngokwephula imithetho. INetLine ihlonipha i-CAN-SPAM, i-CASL, ne-Do Not Call Registry.
Bhalisela i-Free Netline Portal yakho yamahhala Bhalisela i-Netline Demo
Ukudalula: Sisebenzisa izixhumanisi zethu ezihambisanayo kulokhu okuthunyelwe neNetlinePortal neRevResponse.
Tags: ukuhlanganiswa kokuqukethweukugeleza kokuqukethweukuholaingosi ye-netlineiphepha elimhlopheI-Whitepaper
Douglas Karr Monday, August 21, 2017 Tuesday, August 22, 2017
Isizathu Sokuba Singalokothi Senze Izinsizakalo Zokusabalalisa Ukukhishwa Kwabezindaba
I-Aprimo ne-ADAM: Ukuphathwa Kwezimpahla Zedijithali Kuhambo Lwamakhasimende